सिड्नी । अस्ट्रेलियाको राष्ट्रिय वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान संगठन (सिसिरो) ले कोरोनाभाइरस प्रतिरोधी खोप (भ्याक्सिन) को परीक्षण शुरु गरेको छ ।
सिड्नी । अष्ट्रेलियामा कोरोना भाइरस तीब्र रुपमा फैलिएको छ । पछिल्लो रिपोर्ट अनुसार संक्रमितको संख्या ५ हजार १०६ पुगेको छ । त्यस्तै कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण २३ जनाको मृत्यु भएको छ ।
सिड्नी । अष्ट्रेलियाले लागू गरेको नयाँ नियम अन्तर्गत ५ हजार अष्ट्रेलियन नागरिकहरु विभिन्न होटलमा अनिवार्य क्वारेन्टाईनमा बसिरहेका छन् । गएको शनिबारबाट यो नियम लागू भएपछि अष्ट्रेलियन नागरिकहरु विभिन्न होटल र अन्य भाडाका स्थानहरुमा यतिबेला आफुलाई कोरोना लागेको छ कि छैन ? निश्चित गर्न १४ दिने गुप्तबासमा छन् । पछिल्लो समय अष्ट्रेलियामा प्रवेशमा विदेशीहरुलाई रोक लगाइएको छ ।
सिड्नी । कोरोना भाइरस (कोभिड– १९)को संक्रमण फैलिइरहेको बेला अष्ट्रेलिया सरकारले जनताहरुलाई बिभिन्न खालका राहत प्याकेजको घोषणा गरिररहेको छ । कोरोनाको कारण आर्थिक संकट सिर्जना भएपछि जनताहरुलाई राहत दिनको लागि केन्द्रीय तथा राज्य सरकारले विभिन्न खालका प्याकेजहरुको घोषणा गरेको हो ।
एजेन्सी । कोरोना भाइरसले विश्वभर बितन्डा मच्चाईरहेको छ । यस भाइरसको कारणले विश्वको अर्थतन्त्रमा पनि निकै प्रतिकुल असर पुर्याएको छ ।
अष्ट्रेलियाबाट रित्तै फर्किदै नेपाल एयरलायन्सको विमान ?
सिड्नी । काठमाडौँबाट आज अष्ट्रेलियाको ब्रिसबेनका लागि उड्ने नेपाल एयरलाईन्सको विमान फर्किदा रित्तै जाने भएको छ । नेपालबाट वाईडबडीमार्फत सिधै सिड्नी आउने विमानमा फर्किदा नेपाली नागरिक पठाउने प्रयास भएपनि यो प्रयास सफल हुन नसकेको हो । क्यानबेरास्थित नेपाली दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत कोरोना नियन्त्रणका लागि नेपालमा बनेको उच्चस्तरीय समितिमा प्रस्ताव पठाएपनि यो प्रस्तावमा कुनै छलफल भएको छैन ।
सिड्नी । अष्ट्रेलियामा कोरोना भाइरसका कारण हालसम्म १८ जनाको मृत्यु भएको छ । त्यस्तै संक्रमितको संख्या ४ हजार १६३ पुगेको छ । आजमात्रै एक जनाको भाइरसका कारण ज्यान गएको छ । कोरोना भाईरस फैलिन क्रम नरोकिएपछि अष्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री सकट मोरिसनले थप कडा नियम लागु गर्ने भएका छन् । प्रधानमन्त्रीका अनुसार अब सार्वजनिक स्थलमा आफन्त र परिवारको सदस्य बाहेक २ जनाभन्दा बढी व्यक्ति एकै ठाउँमा भेला हुन पाइने छैन ।
अष्ट्रेलियामा कोरोना नियन्त्रण गर्न अझै कडा नियम, भाडामा बस्नेलाई ६ महिनासम्म निकाल्न नपाउने
सिड्नी । अष्ट्रेलिया सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण नियन्त्रणको लागि कडा कदम चालेको छ । प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनले सार्वजनिक स्थलहरुमा दुई जनाभन्दा बढी व्यक्ति सँगै वस्न नपाउने नियम उनले बनाएका हुन् ।